Yaa ka mas'uul ah xilligan amniga Muqdisho? | KEYDMEDIA ENGLISH
Yaa ka mas’uul ah xilligan amniga Muqdisho?
Muran fara badan ayaa maalmihii ugu danbeeyey hareeyey, cida iska leh masuuliyada amniga caasimadda Muqdisho, xilli ay sii badanayaan falalka amni darro.
MUQDISHO, Soomaaliya - Maamulka gobolka banaadir oo ay gadaal ka riixeyso, kooxda sharci darrada ku fadhisa Villa Soomaaliya, ayaa maalmihii ugu danbeeyey muran galiyey, masuuliyada amniga ee ay leedahay wasaaradda amniga xukuumadda xil-gaarsiinta.
Cali Yare Cali, oo ku magacaaban, ku gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka banaadir, ahna nin si toos ah ugu xiran Farmaajo, ayaa carabka ku dhuftay, in amniga Muqdisho uu hoostago gobolka banaadir, isla markaana aan waxba laga weydiineyn wasaaradda Amniga dalka.
Cali Yare ayaa marka laga yimaado inuu u adeegayo Farmaajo, misana u muuqday nin la xifaaltamaya wasiirka amniga dalka Cabdulaahi Maxamed Nuur.
Haddaba yaa iska leh masuuliyada amniga caasimadda?
Xubno ka tirsanaa sirdoonkii hore ee Soomaaliya, iyo qubarada ka faaloota arrimaha amniga, ayaa tilmaamaya, in amnigu uu yahay masuuliyad wadareed, ay cid walba dhinac ka leedahay, waxeyse hoosta ka xariiqeen in xilligan amniga dalka lagula xisaabtamayo wasaaradda amniga xukuumadda xil-gaarsiinta.
Gobolka banaadir ayey ku tilmaameen, la'aan ka mid ah, waaxaha heer gobol, ee loo baahan yahay, in wasaaradda ay kala shaqeeyaan amniga, maaddaama wasaaradda uu hoos yimaado, guud ahaan arrimaha ku qotoma amniga dalka, taas oo ay gobolka banaadir qeyb ka tahay.
Waxey kaloo sheegayaan qubaradu, in gobolka banaadir, aanu matalaad ku lahayn barlamanka dalka, taasina ay keeneyso in amnigooda, uu si toos ah u hoos tago wasaaradda amniga, taas oo ka mid ah hay'adaha dowladda ee caasimadda ku shaqeeya.
Farmaajo ayey tibaaxeen, nin dabada ka riixaya qorshahan, uu gobolka banaadir ku sheeganayo amniga Muqdisho, maddaama uu ka dhacay xukunkiisa, waa nin arrintan u arkaya mid uu ku dagaalami karo, wuxuuna adeegsanayaa Cali Yare Cali, oo ah shakhsi han yar, isla markaana u duleysan meel marinta go'aanada keligii taliyaha.
Hoggaanka waqtigiisu dhamaaday, ma lahan awood uu ku fara-galliyo amniga dalka, waxaana meesha ka baxday darajadiisii ahayd taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, taas oo la dhacday muddo xilleedkiisii dhamaaday sanad ka hor.
Xukunkiisa sharciga ahaa ee dhamaaday, waa mid awood iminka siinaya xukuumadda xil-gaarsiinta, taas oo ay wasaaradda amniga qeyb weyn ka tahay, wuxuuna kal hore sidii la ogaa amniga dalka ku wareejiey Rooble, inkasta oo uu weli doca- doceynayo.